(L) Dopamine သည် _________ (၂၀၁၃) - သင်၏ ဦး နှောက်တွင် Porn On
(L) Dopamine _________ (2013) Is
Dopamine _________ Is
ဒါကြောင့်ကိုချစ်လား? လောင်းကစား? ဆုလာဘ်? စွဲ?
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဇူလိုင်လ 3, 2013,
ကလူ "အဖြစ်ကိုဖော်ပြရန်ကိုချစ်တဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အတူရရှိနေသည်"တဦးတည်းဓာတုအမြဲထွက်မတ်တပ်ရပ်ပုံရသည်။ Dopamine: အပေါငျးတို့သညျကြှနျုပျတို့၏အရှိဆုံးအပွစျရှိအပြုအမူတွေနောက်ကွယ်မှမော်လီကျူးများနှင့်လျှို့ဝှက်မတရားသော။ Dopamine ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်. Dopamine တပ်မက်သောစိတ်ဖြစ်ပါသည်. Dopamine အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ဖြစ်ပါသည်. Dopamine လှုံ့ဆျောမှုဖြစ်ပါသည်. Dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်ပြီး. Dopamine အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပါသည်. Dopamine စွဲဖြစ်ပါသည်.
အကြှနျုပျ၏, dopamine အလုပ်များခဲ့ပါတယ်။
Dopamine တ neurotransmitter လူတိုင်းအကြောင်းကိုသိရန်ပုံရသည်။ Vaughn ဘဲလ်တစ်ကြိမ်ကကိုခေါ် မော်လီကျူး၏ Kim Kardashianဒါပေမယ့်ငါ dopamine မှတရားမျှတမယ့်မထင်ကြဘူး။ ပြောသူကလောက်, dopamine ရဲ့ကြီးတွေ။ ထိုအအပတ်တိုင်းသို့မဟုတ်ဒါသငျသညျသစ်တစ်ခုဆောင်းပါးအားလုံး dopamine နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထဲကရောက်ကြောင်းကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်။
So is dopamine သင့်ရဲ့ မယားစကားစွဲ? သင့်ရဲ့ လောင်းကစားဝိုင်း? သင့်ရဲ့အရက်? သင့်ရဲ့လိင်ဘဝ? အဖြစ်မှန် dopamine, ဤသူအပေါင်းတို့နှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် is သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှ။ Dopamine ကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပါပဲ။ သို့သော်ကရိုးရှင်းပြီးလုပ်မထားဘူး။
dopamine ကဘာလဲ? Dopamine ဟာတစျဦးဖွစျသညျ ဓာတုအချက်ပြမှုများ တကနေသတင်းအချက်အလက်ရှောက်သွား အာရုံခံဆဲလျ သူတို့ကိုအကြားအလွန်သေးငယ်သောနေရာများအတွက်လာမယ့်ရန်။ ဒါဟာပထမဦးဆုံးအာရုံခံဆဲလျကနေဖြန့်ချိလိုက်သောအခါ, ကနှစ်ခုအာရုံခံအကြားအာကာသ (အ synapses) သို့ရှိသတဲ့, ထိုသို့ထို့နောက်လက်ခံရရှိသောအာရုံခံဆဲလျကဆင်းတဲ့ signal ကိုပေးပို့ကြောင်းအခြားဘက်မှာက receptors ဆန့်ကျင် bumps ။ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အသံ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်တွင် neuron ၏တစ်ခုတည်း pair တစုံကနေတက်စကေးအခါ, ကလျင်မြန်စွာရှုပ်ထွေးဖြစ်လာသည်။ dopamine လွှတ်ရာသက်ရောက်မှုများလက်ခံရရှိအာရုံခံသွားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် type ကိုအာရုံခံ၏ကြ၏, (ငါးလူသိများမျိုးရှိပါတယ်) က dopamine binding, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အခန်းကဏ္ဍနှစ်ခုလုံးဖြန့်ချိခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းအာရုံခံဖြစ်ကြ၏ဘယ်အရာကို receptors ရှိရာ, ကနေလာမယ့်မယ့်ဘယ်မှာအပေါ်မူတည် ကစား။
ထိုအ dopamine အလုပ်များပါ! ဒါဟာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအရေးကြီးသောလမ်းကြောင်းထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ သို့သော်လူအများစုသူတို့လှုံ့ဆျောမှု, စွဲလမ်း, အာရုံစူးစိုက်မှု, သို့မဟုတ်တပ်မက်သောစိတ်အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါအထူးသဖြင့်, ထိုသူတို့အဖြစ်လူသိများသည့် dopamine လမ်းကြောင်းအကြောင်းပြောနေတာနေကြတယ်, dopamine အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါ mesolimbic လမ်းကြောင်း, ထိုတူသောတည်ရာအရပ်မှထွက်သူတို့စီမံကိန်းပေးပို့ထားတဲ့နက်ရှိုင်းသောဦးနှောက်အလယ်၌သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံသည့် ventral tegmental ဧရိယာထဲမှာဆဲလ်တွေ, အတူစတင်သည်ရာ နျူကလိယ accumbens နှင့် cortex ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်တိုးမြှင့်တုန့်ပြန်ပေါ်ပေါက် လိင်, မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့် ရော့ခ်နှင့်လိပ်။ ထို့အပြင်မူးယစ်ဆေးစွဲနေစဉ်အတွင်းဤဒေသရှိ dopamine အချက်ပြခြင်းကိုပြောင်းလဲသွားသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအားလုံးသည်အရက်မှသည်ကိုကင်းအထိဘိန်းဖြူအထိတိုးပွားလာသည် တလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြား၌ဤဧရိယာ၌ dopamineနှင့်များစွာသောလူ "။ အပျော်အပါး" "လှုံ့ဆျောမှု" သို့မဟုတ်အဖြစ် dopamine အတွက်ဆူးဖော်ပြရန်ကြိုက်တယ်ဒါပေမယ့်ကအတော်လေးမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ပဲ, dopamine ဟောကိန်းထုတ်ဆုလာဘ်များအတွက်တုံ့ပြန်ချက်အချက်ပြနေသည်။ သငျသညျဆို, အက်ကွဲနေတဲ့ hit နှင့်အတူ (ကအက်ကွဲပိုက်လိုမျိုး) တစ်ဦး cue ပေါင်းသင်းသင်ယူကြလျှင်, သင်တုံ့ပြန်အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine အတွက်တိုးလာပြီစတင်မည် မျက်မှောက် သင့်ဦးနှောက်အကျိုးကိုခန့်မှန်းထားသည်အတိုင်း, ပိုက်၏။ သငျသညျထို့နောက်သင့်ထိခိုက်မရကြပါလျှင်မူကား, ကောင်းစွာ, ထို့နောက် dopamine လျော့ကျနိုင်ပြီး, တစ်ကောင်းသောခံစားမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်သင်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး dopamine ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းကြောင်းထင်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ကြောင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးရရှိသွားတဲ့။ သူတို့အခါဥပမာအားဖြင့်, dopamine Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်အတူလူအတွက်နျူကလိယ accumbens တိုးပွါးနိုင်ပါတယ် ကြီးထွားသတိဝီရိယကြုံနေရ နှင့်လီယံ။ ဒါကြောင့်သင်ပြောကောင်းပြောမယ်, အနည်းဆုံးဒီဦးနှောက်ဧရိယာ၌, dopamine စွဲသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မဟုတ်ပေ။ အဲဒီအစားသူကကျွန်တော် salience ခေါ်ပါတယ်။ Salience အာရုံစူးစိုက်မှုထက် သာ. : ဒါဟာအာရုံကိုပေးဆောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖွင့် သို့ထွက်ရပ်ကြောင်းအရာတစ်ခုခု။ ဒါဟာအာရုံကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါလည်းစွဲ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက် mesolimbic အခန်းကဏ္ဍ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
သို့သော်ကိုယ်တိုင်က dopamine? ဒါဟာ salience မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာကစားရန်ဦးနှောက်အတွက် ပို. အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, dopamine လှုပ်ရှားမှုစတင်အတွက်ကြီးမားတဲ့အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဦးနှောက်ဧရိယာထဲမှာ dopamine အာရုံခံ၏ပျက်စီးခြင်းကိုခေါ် substantia nigra ၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုထုတ်လုပ်ဘာလဲ ပါကင်ဆန်ရောဂါ။ Dopamine ကိုလည်းဟော်မုန်းအဖြစ်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ, ဟန့်တား prolactin မိခင်နို့များလွှတ်ပေးရန်ကိုရပ်တန့်ရန်။ ပြန် mesolimbic လမ်းကြောင်းအတွက်, dopamine အတွက်အခန်းကဏ္ဍကစားနိုင်ပါတယ် စိတ္တနှင့် schizophrenia ပစ်မှတ် dopamine ကုသမှုအတွက်အများအပြား antipsychotics ။ Dopamine အတွက်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည် အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်တူအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ ခန္ဓာကိုယ်၏ကျန်ခုနှစ်, dopamine ပျို့အတွက်, ကျောက်ကပ် function ကို၌၎င်း, နှလုံး function ကိုပါဝင်ပတ်သက်သည်။
dopamine, က "အာရုံစူးစိုက်မှု" သို့မဟုတ်နဲ့တူသောအရာတို့ကိုရန်ရိုးရှင်းသော dopamine ကြည့်ဖို့ငါ့အဆိတ်ကိုရရှိသွားတဲ့ပါဘူး "စွဲ။ " အားလုံးပြီးနောက်, ဤအံ့သြဖွယ်, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာရှိသမျှနှင့်အတူ, က "dopamine X ကိုဖြစ်ပါတယ်" နှင့်တစ်ရက်ကပဌနာပြောနိုင်အောင်လွယ်ကူသည်။ ဒါဟာနှစျသိမျ့ပါပဲ။ သငျသညျအခြို့သောအခြေခံဇီဝအဆင့်မှာအမှန်တရားကိုသိကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရနှင့်ကြောင်းကိုပါပဲ။ ထိုအထွက်ရှိတယ်ယုံကြည်တယ်သင်စွန့်ခွာဖို့ X တွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖေါ်ပြခြင်းအလုံအလောက်လေ့လာမှုများအစဉ်အမြဲရှိပါသည်။ သို့သော် dopamine, ဒါမှမဟုတ်ဦးနှောက်ထဲမှာမဆိုဓာတု simplifying ချတစ်ခုတည်းအရေးယူသို့မဟုတ်ရလဒ်လူတွေကိုအဘယ်အရာသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကမယ့်မမှန်သောရုပ်ပုံပေးသည်။ သငျသညျ dopamine လှုံ့ဆျောမှုသည်ဟုမထင်လျှင်, ပိုပြီးလက်ျာဘက်, ပိုကောင်းတဲ့ဖြစ်ရပါမည်နည်း မဟုတ်သေချာပေါက်! dopamine လည်း "အပျော်အပါး" သို့မဟုတ်လျှင်သောကြောင့် "အမြင့်ဆုံး," ထို့နောက်သိပ်ကောင်းတစ်ဦးအရာ၏ဝေးလွန်းဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအဖြစ် dopamine စဉ်းစားခဲ့လျှင် သာ အပျော်အပါးသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းသောအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဖြစ်ခြင်း, သင်မူးယစ်ဆေးစွဲသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါကဲ့သို့ dopamine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတချို့၏မိစ္ဆာအယူအဆနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်, သင်ကသူတို့ကို fix ဖို့ဘယ်လိုများ၏မှားယွင်းသောအတွေးအခေါ်များနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။
ငါမကြိုက်ဘူးအခြားအကြောင်းရင်းရိုးရှင်းလွယ်ကူတာ dopamine ၏အံ့သြစရာဝေးကြာသောကွောငျ့တပ်ဖြစ်ပါတယ် "dopamine ဖြစ်ပါတယ်" ။ သငျသညျကိုယုံပါလျှင် "dopamine ဖြစ်ပါတယ်" ဟုပြီးနောက်သင်ကျနော်တို့ကအားလုံးကိုထွက်နေသေးတယ်ရရှိပါသည်ထင်ချင်ပါတယ်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့သေးဒီစွဲပြဿနာဖြေရှင်းကြပြီမဟုတ်အဘယ်ကြောင့်တွေးမိမှစတင်။ ရှုပ်ထွေး (ထိုကိစ္စအဘို့, သို့မဟုတ်ဦးနှောက်ကိုအခြားဓာတုသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အတူ) dopamine နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါများကိုမကြာခဏနားလည်ရန်ခက်ခဲများနှင့်ဆက်ဆံဖို့ ပို. ပင်ခက်ခဲကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။
dopamine ရဲ့ရှုပ်ထွေးအဓိကထားခြင်းအားဖြင့်, ငါတပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းအချို့ကိုပယ်ရှားယူပြီးတာနဲ့တူခံစားမိလိမ့်မယ်, အဆိုပါ sexy, dopamine ၏။ သို့သော်လည်းငါသည်ဒါမစဉ်းစားကြဘူး။ တစ်ဦး neurotransmitter မည်သို့ပြုမူ၏ရှုပ်ထွေးကြောင့်အံ့သြစရာစေသည်အရာဖြစ်တယ်။ တစ်ခုတည်းမော်လီကျူးနှင့်၎င်း၏ receptors ၏ရိုးရှင်း dopamine ဒီတော့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရလဒ်စနစ်များဒါရှုပ်ထွေးဖြစ်ခွင့်ပြုစေသည်အရာဖြစ်တယ်။ ထိုသို့ဖွင့် dopamine မဟုတ်ပါဘူး။ dopamine ရုံငါးခုအဲဒီ receptor အမျိုးအစား, အခြား neurotransmitter ရှိပါတယ်နေစဉ်, serotonin, 14 လက်ရှိလူသိများခဲ့ပြီး ပို. ပင်တည်ရှိဖို့စဉ်းစားနေကြတယ်။ အခြားအ neurotransmitters ကွဲပြားခြားနားနှင့်အတူ receptors များ Subtypeလူအပေါင်းတို့ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း, ဘယ်မှာချင်းစီပေါင်းစပ်တဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ရလဒ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အဲဒီမှာအာရုံခံများစွာသောအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ဆက်သွယ်မှုဘီလီယံပေါင်းများစွာနှင့်ဘီလီယံစေ။ ဤရွေ့ကား, အပေါငျးတို့သဒါသငျသညျ, လမ်းလျှောက်ဆွေးနွေးချက်စားခြင်း, ချစ်ခြင်းအတွက်လဲလက်ထပ်ရနိုင်, ကွာရှင်းရ, ကိုကင်းစွဲရနှငျ့အခြို့သောနေ့ရက်သည်သင်၏စွဲ၏ထိပ်ပေါ်မှာမှထွက်လာကြ၏။ သင်သည်သင်၏လက်ချောင်းစာမျက်နှာ-သငျသညျကိုဆင်း scroll သကဲ့သို့သင်တို့ဦးနှောက်မှ, အပြောင်းအလဲနဲ့ရန်, ဥာဏ်, လှုပ်ရှားမှုဤဝါကျ-ကနေမျက်စိကိုဖတ်ပါနှင့်နားလည်ရန်အဘို့အရိုးရှင်းစွာလိုအပ်သည့်ဆက်သွယ်မှုများကိုများ၏သက်သက်အရေအတွက်ထင်သည့်အခါအံ့သြတဲ့အသိခံစားရရန်စတင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်ကို pepperoni ပီဇာကိုစဉ်းစားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်စာသားသည်သင်၏အရူးအမူးကိုစလှေတျစေသည်တောင်စဉ်ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမ အမှန် နည်းလမ်းများ။ ရှုပ်ထွေးကသောဦးနှောက်ဟာစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်စိတ်ကိုထူးခြားဆန်းကြယ်အရာစေသည်။
ဒီတော့ dopamine မယားစကားသို့မဟုတ်ကင်းမှဖြစ်စေ, စွဲလမ်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာတပ်မက်နှင့်ချစ်ခြင်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာနို့နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါဟာလှုပ်ရှားမှု, လှုံ့ဆော်မှု, အာရုံစူးစိုက်မှု, စိတ္တနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ Dopamine ကဤသူအပေါင်းတို့အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဒါပေမယ့် is သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှနှင့်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်သင့်ပါဘူး။ ၎င်း၏ရှုပ်ထွေးကြောင့်အကြီးအကယျ။ ဒါဟာတစ်ခုတည်းသောမော်လီကျူးနှင့်တကွ, ဦးနှောက်အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်, ကျွန်တော်တို့ကိုပြသသည်။